Ingiriiska oo Maalgalinaya Jamhuuriyada Somaliland | Dhaymoole News
Ingiriiska oo Maalgalinaya Jamhuuriyada Somaliland
London (Dhaymoole)- Wasiirka arrimaha debadda ee Dawladda Ingiriiska, Iza Truss ayaa sheegtay in ay maalgashi ku samaynayaan saddex waddan oo ay ku jirto Jamhuuriyadda Somaliland. Mashruucaasi maalgashi ayaa ah mid lagu kobcinayo dhaqaalaha dalalkaas.
Iza Truss ayaa sheegtay in dawladdeedu ay maalgashi cusub ku samaynayso waddamada Senegal, Somaliland iyo Masar. Waxaana mashruucaas fulinaysa Hay’adda horumarinta maaliyadda ingiriiska oo magaceeda loo soo gaabiyo (UK CDC Group), taas oo heshiis la gashay shirkadda DP World.\_
Wasiirka arrimaha debadda ee Dawladda Ingiriiska, Iza Truss oo arrimahaasi ka hadlaysayna waxay tidhi ““Boqortooyada Midowday (UK), iyada oo adeegsanaysa Hay’adda maaliyadda horumarinta ee UK CDC Group, ayaa diyaarinaysa maalgashiyo cusub oo lagu samaynayo dekeddaha ku yaal Senegal, Masar iyo Somaliland, iyada oo loo dhexmarayo DP World” .
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UK, Liz Truss, oo hadalkeeda si wadata ayaa tidhi: “Waxaan la shaqeyneynaa xulafada iyo la -hawlgalayaasha si aan u maalgelinno kaabayaal nadiif ah oo la isku halleyn karo ee waddamada soo koraya. Iskaashigan cusub ee CDC iyo DP World wuxuu kor u qaadi doonaa shaqooyinka wuxuuna horseedi doonaa kobaca dhaqaalaha dalalkan, isagoo gacan ka geysan doona hagaajinta malaayiin qof oo ku nool guud ahaan Afrika”
Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP World iyo wakaaladda maaliyadda horumarinta Britain ee CDC Group ayaa Salaasadii shalay kala saxeexday qorshaha heshiis ay si wadajir ah ugu maalgeliyaan illaa $ 1.72 bilyan kaabayaasha dhaqaalaha Afrika sannadada soo socda, oo ay ugu horreyso casriyeynta saddex dekedood.
Iskaashigan iyo heshiiska maalgelintan ayaa la sheegay in uu dabooli baayiha dhaqaale ee maalgashiga muddada –dheer, sidoo kale waxa uu taageeri doonaa casriyeynta iyo ballaadhinta dekedaha iyo saadka gudaha Afrika oo dhan, oo ay ugu horreeyaan dekedaha Dakar (Senegal), Sokhna (Masar) iyo Berbera (Somaliland).
Shirkadda DP World ayaa markii ugu horreysay gacan ka geysaneysa saddexda dekadood ee hadda jira waxayna rajaynaysaa inay ku maalgeliso $ 1 bilyan oo dheeraad ah dhowrka sano ee soo socda. CDC waxay ballanqaadaysaa qiyaastii $ 320m marka hore waxayna filaysaa inay maalgeliso ilaa $ 400m oo dheeraad ah dhowrka sano ee soo socda. Ballaadhinta Senegal oo keliya ayaa la filayaa inay noqoto maalgashigii tooska ahaa ee shisheeye ee xeebta (FDI) oo ku dhow $ 1bn.
Ganacsiga suurtageliyay saddexda dekadood ee bilowga ah ayaa taageeri doona 5m oo shaqooyin oo ka jira dhaqaalaha ballaadhan, sida ay wada -hawlgalayaashu sheegeen, kuwaas oo 138,000 la filayo in ay abuuraan ballaadhinta dekadda socota iyo casriyeynta.
Marka la gaadho 2035, waxaa la saadaalinayaa in $ 51bn oo ganacsi dheeri ah lagu dhaafi doono dekedaha, taas oo u dhiganta 3% GDP -ga Senegal, 3% GDP Masar iyo 6% GDP -ga Somaliland. Casriyeynta dekedaha ayaa sidoo kale loogu talagalay in lagu wanaajiyo helitaanka badeecadaha muhiimka ah iyo waxyaabaha daruuriga ah oo ay ku jiraan cuntada; kaas oo la filayo inay lahaadaan aagag wax -tar leh oo ka durugsan Geeska Afrika oo dhan iyo qaybo ka mid ah Saaxil. Dekadaha ayaa sidoo kale kor u qaadi doona warshadaha dhoofinta oo ay hadda ku liitaan wax -qabad la’aanta saadka.
“Iskaashigan aannu la leenahay CDC wuxuu na siinayaa dabacsanaan ballaadhan si aannu u dardargelinno ugana faa’ideysanno fursadahan, waxayna noo suurtogelin doontaa inaanu sare u qaadno maal -gashigayada dekedaha iyo kaabayaasha saadka ee Afrika oo dhan,” ayuu yidhi Sultan Ahmed Bin Sulayem, oo ah guddoomiyaha kooxda iyo agaasimaha DP World. “Iskaashigu wuxuu u abuuri doonaa fursado isbeddel malaayiin qof tobanka sano ee soo socda.”
Nick O’Donohoe, oo ah madaxa fulinta ee CDC Group, ayaa yidhi: “Awoodda buuxda ee Afrika waxaa xaddiday dekado aan ku filnayn iyo caqabado ganacsi, taasoo horseed u ah koboca dhaqaalaha qaar ka mid ah dalalka ugu dhaqsaha badan dunida ee kobcaya isla markaana wiiqaya adkeysiga bulshada qeybaha ugu horumarsan. aduunka. Mashruucan wuxuu ka caawin doonaa ganacsatada inay dardar geliyaan kobaca iyagoo marin u leh waddooyin ganacsi oo la isku halleyn karo waxayna ka caawin doontaa macaamiisha Afrika inay ka faa’iideystaan ​​isku halaynta la hagaajiyay iyo qiimaha badeecadaha muhiimka ah iyo waxyaabaha daruuriga ah ee cuntada.